कस्ता कस्ता अवस्थामा हुन्छ चेक बाउन्स र कारवाही व्यवस्था ? - Lokpukar
कस्ता कस्ता अवस्थामा हुन्छ चेक बाउन्स र कारवाही व्यवस्था ?
कार्तिक २, २०७८, ६:१७ PM
जनकपुरधाम । आर्थिक कारोबारका लागि बैंक मार्फत चेक प्रयोगको तरिकाले सहज बनाएको छ । नगद कारोबारलाई सहज र सुलभ तथा छिटोछरितो बनाउन चेकको प्रयोग गरिन्छ ।
व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा पनि एकआपसमा बैंक मार्फत हुने आर्थिक कृयाकलाप या कारोवारलाई सुव्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न नगदको सट्टामा प्रयोग गरिने एकप्रकारको मौद्रिक उपकारण चेक हो ।
यो व्यक्ति–व्यक्ति विच वा व्यक्ति र संस्था विच आर्थिक कारोवार संचालन गर्ने लिखित उपकरण हुनुका साथैै रकम लेनदेनको प्रमाण पनि हो । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा २ (ज) ले चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनुभनि कुनै वैक उपर खिचिएको विनियम पत्रलाई सम्झनु पर्दछ, भनेको छ ।
चेकको कारोवारले एकातर्फ लेनदेन व्यबहार र आर्थिक कारोवारलाई सरलता र सहजता प्रदान गरेको छ भने अर्को तर्फ यसको दुरुपयोग पनि त्यतिकै नै बढेको छ । खातामा रकम नभएपनि देनदारलाई झुक्याउन बदिनियत पुर्ण तरिकाले चेक काटने गरिन्छ । यस्ता क्रियाकलापलाई चेक अनादर भनिन्छ जसलाई अंग्रेजीमा चेक बाउन्स भन्ने गरिन्छ ।
चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भएपनि पर्याप्त छैन भनी जान्दा जान्दै चेक काटि दिएमा (चेक धारक अर्थात) चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको अबस्था अर्थात कुनैपनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भूक्तानी नदिएको वा चेक भूक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेकअनादर अर्थात चेक बाउन्स हो ।
खातावालाकै कारणवाट चेक भुक्तानी नभएमा वा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुदै चेक काटी दिएमा, वा निश्चित कारणविना अन्य व्यक्तिलाई दिएको चेक स्टप गरेमा वा अन्य कुनै कारणवाट चेक नसाटिएमा त्यस्तो कार्य चेक अनादर भएको मानिने र त्यस्ता कार्य गर्नेलाई जरिवाना, र सजाय समेत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले चेक अनादरका सम्बन्धमा विशेष व्यबस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ५३ बमोजिम चेक धारक अर्थात चेक पाउने व्यक्तिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित बैंक समक्ष उक्त चेक पेश गर्नुपर्छ । उक्त अवधी गुज्रीएपछि पेश भएमा भूक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अबस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनु पर्छ ।
यसरी कुनैपनि बैंकमा भूक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारण सहित बैंकबाट भूक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक वाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि खातावालाले खाता बन्द गरेमा पनि चेक वाउन्स हुनसक्छ । चेकबाहकले कसैलाई चेक भूक्तानीको लागि चेक काटी दिइसकेपछि सम्बन्धित बैंकलाई पहिले काटिसकेको चेक भूक्तानी नगर्न दिएको लिखत अनुरोध वा आदेश चेक स्टप हो ।
विना आधार र कारण सामान्य अबस्थामा चेकबाहकले आफुले जारी गरिसकेको चेकको भूक्तानी रोक्नु पनि चेक अनादर हो । यदि चेक दिएको व्यक्तिको चेक हराएमा, चोरी भएमा, करकापमा परि चेक कटाएको प्रमाणित भएमा वा चेक रोक्का राख्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण भएको अबस्थामा बाहेक चेक रोक्का राख्नु हुँदैन ।
विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६५ अनुसार, चेक पाएको व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकमको भुक्तानी पाए नपाएको कुरालाई चेक वाउन्सको आधार मानेको छ । प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने व्यक्तिले वा विनिमयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वा चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा सो प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिनेछ ।
चेक बाउन्समा कारवाही व्यवस्था
विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले वैकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्वन्धित वैक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणवाट, वैकवाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनेको छ ।
केही गरी चेक वाहकको चेक चोरी भएको वा हराएकोमा, आफ्नो खातामा भएको रकमको सुरक्षार्थ सम्वन्धित वैकलाई चेकबाहकले सुचना दिई खाता रोक्का राखेमा चेक बाउन्स हुँदैन । तर चेक हराएको वा चोरी भएकोमा खातावालाले सम्वन्धित निकाय समक्ष उजुर गरेको भने देखिनु पर्छ । चेक चोरी भएको वा हराएको प्रमाण पेश भएमा चेक अनादर भएको मानीदैँन, भन्ने व्यबस्था पनि कानूनमै गरिएको छ ।